कक्षा ११ मा भर्ना हुन नयाँ मापदण्ड !
ARCHIVE, NEWSPAPER » कक्षा ११ मा भर्ना हुन नयाँ मापदण्ड !
सरकारले कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यमान आधार (मापदण्ड) मा सामान्य परिवर्तन गरेको छ।
शिक्षामन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट केही विषयमा पढ्न विगतमा लागू गरिएको स्तरीकृत अङ्क (जिपिए) का आधारमा सामान्य परिवर्तन भएको हो। कक्षा ११ र १२ को सम्बन्धन प्राप्त सबै माविले नयाँ निर्णयनुसार भर्ना गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
यस्तै अर्थशास्त्र, शिक्षा, अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित, भूगोल, लेखा आदि र प्राविधिक विषय पढ्न न्यूनतम जिपिए १.६ ल्याउने विद्यार्थीले कक्षा ११ भर्ना हुन पाउनेछन्।